Mbido si eduzi SQL ogwu ogbugba na Cross-n'Scriptntanet Ederede | Martech Zone
Mbido si eduzi SQL ogwu ogbugba na Cross-n'Sitentanet Ederede
Wenezdee, Jenụwarị 3, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Anọghị m n'ọnọdụ ebe m ga-echegbubiga onwe gị ókè banyere nchebe, mana m na-anụkarị gbasara nsogbu ndị anyị na-echebe onwe anyị. Naanị m na-ajụ ụfọdụ ndị nwere ọgụgụ isi sistemụ ụkpụrụ ụlọ na ọ na-ekwu, “Ee, anyị ekpuchiri.”
Agbanyeghị, enwere nchedo 'hacks' abụọ ma ọ bụ adịghị ike nke ị nwere ike ịgụ gbasara ọtụtụ na net ụbọchị ndị a, SQL Injection na Cross-Site Scripting. Amatala m ha abụọ ma gụọkwa akwụkwọ akụkọ 'techy' ole na ole na ha, mana na-abụghị ezi onye mmemme, m na-echekarị maka mmelite nche ma ọ bụ naanị ijide n'aka na ndị ziri ezi maara ma aga m aga.
Uzo abuo abuo a bu ihe onye obula kwesiri imata, ma ahia. Nanị ikenye ụdị ntanetị dị mfe na webụsaịtị gị nwere ike mepee sistemụ gị ruo ihe ọjọọ ụfọdụ.
Osisi Brandon emeela nnukwu ọrụ nke ide Nduzi Mmalite na isiokwu abụọ ọbụlagodi gị ma onwe m nwere ike ịghọta:
SQL ịgba ntụtụ
Obi ụtọ na Afọ Ọhụrụ Afọ… Ma eleghị anya
Na-abanye na saịtị 100,000 kachasị na Alexa
Jan 3, 2007 na 11: 40 AM
Chei, daalụ maka post Doug. Enwere m nsọpụrụ… 🙂
Nsogbu ị kọwara nke amaghị n'ezie ka esi achọpụta ụdị adịghị ike ndị a bụ nnukwu nsogbu m na-ahụ. Ọ bụrụ na m gosi onye mmemme nke na-amaghị ihe gbasara nchekwa otu koodu ma jụọ ha ma ọ bụrụ na ọ dị nchebe, n'ezie ha ga-ekwu na ọ dị nchebe - ha amaghị ihe ha na-achọ!
Ezigbo isi ebe a bụ ịkụziri ndị mmepe anyị ihe ha ga-achọ, yana otu esi edozi ya. Nke ahụ bụ ebumnobi m ji dee isiokwu abụọ m.
Jenụwarị 3, 2007, elekere 2:37 nke abalị
O nwere ike ọ gaghị abụ ebe kwesịrị ekwesị mana ọ bịara ịkọwa otu ihe dị mkpa.
PS: Ọ ga-amasị m ịgwa banyere nnukwu ihe ize ndụ na wordpress na m nwere ike ịchọta. Isi mbanye anataghị ikike ya na wordpress nwere ihe ize ndụ nke 7/10. Anaghị m mgbasa ozi mana lelee post m html-injection-and-being -hacked.Biko agwala ndị na-ede blọgụ ndị ọzọ maka nke a. Mụ na Matt(WordPress) nwere mkparịta ụka na email gbasara ya
Jenụwarị 6, 2007, elekere 8:43 nke abalị
Daalụ maka ime ka m mara banyere nke a – M kwalite na WordPress 2.0.6. Ekwenyere m na ọ lekọtara okwu a.
Jenụwarị 6, 2007, elekere 8:47 nke abalị
Ee ya n'ofe ugbu a. Ọ dị mma na nsụgharị ọzọ pụtara ngwa ngwa
PS: anyị nwere ike ịnweta mgbanwe njikọ? gwa m ma ọ bụrụ na-amasị gị echiche
Jun 25, 2008 na 3: 33 PM
WordPress MySQL nyocha na-anọghị n'ịntanetị?
Ọ nwere ngwá ọrụ dị nwere ike inyocha ihe
Tebụl WordPress MySQL na-anọghị n'ịntanetị ebupụ na phpMyAdmin?
Anyị nwere nchekwa data WordPress MYSQL nke yiri ka ọ nwere
nwere SQL injection.